‘हामी तितो सत्य बोल्छौं जसले विद्यार्थीको भोलीको भविष्य सुरक्षित हुन्छ’ | Makalukhabar.com
‘हामी तितो सत्य बोल्छौं जसले विद्यार्थीको भोलीको भविष्य सुरक्षित हुन्छ’
अस्ट्रेलियामा एइसी माइग्रेसन एण्ड एजुकेशन कन्सल्टेन्सी चलाउँदै आएका होम दवाडी नेपालमा अस्ट्रेलियन एजुकेशन कन्सल्टिङबाट विद्यार्थीलाई शैक्षिक परामर्श दिइरहेका छन् । सन् २००८ मा विद्यार्थी भिसामा श्रीमती सहित अस्ट्रेलिया पुगेका उनले शुरुवाती दिनमा धेरै दुखः भोगे । बसाईको समस्या, भाषाको समस्या, पढाईको समस्या तथा कामको समेत समस्यालाई चिर्दै १० वर्षको दौरानमा उनले अस्ट्रेलियाको पिआर पनि पाए भने, आफ्नो मेहनत अनुसार आर्थिक उपार्जन पनि गरे ।
दवाडी विदेश जाने विद्यार्थीहरुले उचित परामर्श नपाउँदा दुखः पाउने गरेको बताउँदा आफ्नै उदाहरण दिन्छन् । नेपाली विद्यार्थी अर्बोड स्टडीमा जाँदा समस्यामा नपरुन् भनेर उनले आफ्नो पढाई पुरा गरेपछि अस्ट्रेलिया र नेपाल दुवै स्थानमा कन्सल्टेन्सी स्थापना गरेको जिकिर गर्छन् ।
१) तपाई कसरी अस्ट्रेलिया पुग्नु भयो ?
२००८ मा श्रीमती सहित अस्ट्रेलिया गएँ । अस्ट्रेलिया आएपछि मैले अध्ययनलाई निरन्तरता दिँदै धेरै संघर्ष गरें । अस्ट्रेलिया पुगेपछि हामीलाई अब के गर्ने ? कसरी अगाडी बढ्ने ? अन्यौलता थियो । भाषाको समस्या, कामको समस्या, बसाईको समस्या, चारैतिर समस्याबाट जेलिए पनि सफलता पाउन संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने आत्मविश्वास भने थियो । ती सबै समस्यालाई चिर्दै अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हुँ । अहिले अस्ट्रेलियाको पिआर लिइसकेको छु । घर किनेको छु, परिवारलाई सेटल गर्न सफल भएको छु ।
२) अर्बोड जाने विद्यार्थीले शुरुका दिनमा संघर्ष गर्नुपर्ने कुरा सामान्य होकी अरु कारण छ ?
यो जरुरी पनि देख्छु म । मान्छे नेपालमै होस वा विदेशमा मानसिक र शारीरिक रुपमा संघर्ष गर्न सक्ने भएपछि मात्र अगाडी बढ्न सक्छ । जे कुराले मार्दैन त्यसैले मान्छेलाई बलियो बनाउँछ । नेपालमा परिवारसँग रहेको मान्छे अस्ट्रेलिया आउँने वित्तिकै फरक संस्कृति, कानुन, भाषामा भिज्न समय लागि हाल्छ । तर, अस्ट्रेलियामा परामर्शदातृ निकायबाट सपोर्ट लिन सकियो भने सहजै हुन्छ ।
अहिलेको परिस्थितिमा अस्ट्रेलियामा कामको थोरै समस्या छ । विद्यार्थी अलिकति सोसियल भयो भने खानै नपाउने बाच्नै नसक्ने अवस्था छैन ।
३) अस्ट्रेलियामै सेटल भएको मान्छेलाई कन्सल्टेन्सी खोल्छु भन्ने सोच कसरी आयो ?
मैले अघि भने, शुरुका दिनमा जुन समस्या भोगें त्यसले यहि क्षेत्रमा केहि गर्न सक्छु भन्ने बनायो । अस्ट्रेलियामा रेडियो चलाएँ । नेपालीहरुसँग हरेक कार्यक्रममा घुलमिल हुन्थे । धेरै नेपाली विद्यार्थीले आफ्ना दुखः पिडा सुनाउँथे । ती दुखः पिडाहरु सुन्दा ‘अब अस्ट्रेलिया आउने नेपालीले मैले भोगेको जस्तो दुखः भोग्नु हुँदैन ।’ भन्ने महशुष भयो र, त्यहि समस्यालाई हल गर्न एइसी स्थापना गरेको हुँ ।
४) एइसीले पछिल्लो समय कसरी काम गरिरहेको छ ?
एइसी नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त कन्सल्टेन्सी हो । झट्ट नाम सुन्दा यसले अस्ट्रेलियाका लागि मात्र काम गर्छ जस्तो लाग्छ । तर, हामी यूके, क्यानडा, युरोप, न्युजलेण्ड जस्ता देशहरुका लागि पनि काम गर्छौं । हामीसँग अस्ट्रेलियन सर्टिफाइड माइग्रेसन एजेण्ट हुनुहुन्छ । नेपालमा ९ वटा शाखा छन् ।
५) अस्ट्रेलिया नेपाली विद्यार्थीका लागि के कारणले उत्कृष्ट शैक्षिक गन्तब्य हो ?
अस्ट्रेलिया भनेको विश्वकै टप युनिभर्सिटी र कलेज भएको देश हो । जहाँ विश्वका हरेक देशबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्न विद्यार्थीहरु आउँछन् । अस्ट्रेलियाको शिक्षा विश्वभर विक्ने गर्दछ । अस्ट्रेलिया गइसकेपनि विद्यार्थीले त्यहाँ पढ्ने मात्र हैन कि ओभरल आफ्नो विकास गर्ने मौका पाउँछ ।
नेपालमा पढ्दा हामी किताबको किरो हुन्छौं भने, अस्ट्रेलियामा पढ्दा हामीसँग विश्वकै उत्कृष्ट डिग्री हुन्छ र साथमा सीप पनि हुन्छ, जसलाई हामी जुनसुकै देशमा गएर प्रयोग गर्न सक्छौं ।
कोही विद्यार्थी अस्ट्रेलिया गएर पढेर आउँछ भने उसको काम गर्ने, सोच्ने शक्ति नै फरक हुन्छ । यूके, युरोपतिर जाँदा लाइफ थोरै गाह्रो छ । यूकेमा पिआर पाउन १० वर्ष लाग्छ भने, अस्ट्रेलियामा मास्टर्स गरेको विद्यार्थीले २ वर्ष पढेर पिआर पाउन सक्छ । अस्ट्रेलियामा कलेज शुल्क महंगो पनि छैन । काम पाउन त्यत्ति गाह्रो छैन, हावापानी राम्रो छ । विदेशी विद्यार्थीका लागि राम्रो कानुन छ । युनिभर्सिटीहरुका पोलिसी राम्रा छन् ।
६) एइसीसँग अस्ट्रेलियाका कस्ता युनिर्भसिटी र कलेज छन् ?
हामीसँग अस्ट्रेलियाका सबै स्टेटका सबै प्रकारका कोर्ष कभर गर्ने युनिभर्सिटी र कलेजहरु छन् । विद्यार्थीको चाहना र रोजाई अनुसार उनीहरुको शैक्षिक आर्थिक अवस्था हेरेर परामर्श दिन्छौं । पछिल्लो समय यूकेको भिसा राम्रो छ । हामीले यूकेको प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयका लागि पनि काम गरिरहेका छौं ।
७) अस्ट्रेलियाले नेपाललाई लेवल–३ मा राख्नुको अर्थ के हो ? यसले नेपाली विद्यार्थीलाई कस्तो असर परेको छ ?
‘खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन’ भने जस्तै, नेपाली विद्यार्थीलाई अस्ट्रेलिया अध्ययनका लागि केहिले छेकेको छैन । अस्ट्रेलियाले प्रायः आफ्नो शैक्षिक नियमहरु चेञ्ज गरिरहेको हुन्छ । पछिल्लो समय अस्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीको संख्या बढेपछि थोरै टाइट मात्रै गरेको हो । लेवल ३ मा राख्ने वित्तिकै नेपाली विद्यार्थी जानै नपाउने हैन । मात्र फाइनान्स र डकुमेन्टेशनमा केहि प्रावधान थपेको हो । यसले विद्यार्थी, कन्सल्टेन्सी कसैलाई असर गर्दैन । अब अस्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीले जेन्युन फाइनान्स, जेन्युन डकुमेन्टेशन पेश गर्नुपर्छ भन्ने मात्र हो ।
८) उच्च शिक्षाका लागि अर्बोड जाने विद्यार्थीले के–के तयारी गर्नुपर्छ ?
सुरुमा आफ्नो एकेडेमिक क्षमता मजवुत बनाउनुपर्छ । कक्षा १२, ब्याचलर तहमा ए, ए प्लस, वि, वि प्लस ल्याउनु पर्छ । आएल्स, पिटिइ, टोफल जस्ता अंग्रेजीका कोर्षहरुमा ६, ६.५, ७, ७.५ अंक ल्याउनुपर्छ । आर्थिक पाटो राम्रो बनाउनु पर्यो । यी कुरा गरेपछि विद्यार्थी अस्ट्रेलिया जानका लागि सक्षम हुन्छ ।
९) कन्सल्टेन्सी छनौटमा ध्यान नदिँदा विद्यार्थी समस्यामा परेका उदाहरण छन्, सहि कन्सल्टेन्सी कसरी छनौट गर्ने ?
विद्यार्थीले सही परामर्श पाउन सकेनन् भने अर्बोडमा समस्या आउन सक्छ । यो कुरा कन्सल्टेन्सी सञ्चालकले बुझ्नुपर्छ । विद्यार्थीले पनि जेन्युन कन्सल्टेन्सी छनौट गर्नुपर्छ । यसकालागि कन्सल्टेन्सी नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त होकि हैन प्रष्ट हुनुपर्छ । कन्सल्टेन्सी इक्यान जस्ता शैक्षिक परामर्श ब्यवसायीका छाता संगठनमा छ छैन जानकारी लिनुपर्छ । कन्सल्टेन्सीमा रहेका काउन्सलर आफैं क्वालिफाइड एजुकेशन एजेन्ट अथवा माइग्रेसन एजुकेशन एजेन्ट फर्म अस्ट्रेलिया हो हैन बुझ्न जरुरी छ । त्यसपछि आफु जाने देश, कलेज, विश्वविद्यालयका बारेमा समेत बुझेर प्रक्रिया अगाडी बढाउँनु पर्छ ।
७) एइसीले अर्बोड स्टडीमा जाने विद्यार्थीलाई कसरी काउन्सेलिङ गर्छ ?
एइसीमा क्वालिफाइड एजेन्ट र माइग्रेसन एजेन्ट दुवै छन् । म आफैं क्वालिफाइड एजेन्ट भएकोले विद्यार्थीलाई प्रोपर काउन्सेलिङ गर्दछु । १२ वर्षदेखि अस्ट्रेलियामा बसेर अनुभव हासिल गरेको छु । हामी तितो सत्य बोल्छौं, जसले विद्यार्थीलाई भोलीको भविष्य सुरक्षित बनाउन काम लाग्छ । कुनै झुट्टा आश्वासन बाँड्दैनौं ।
८) काउन्सेलिङका लागि आउने विद्यार्थीको आर्थिक, शैक्षिक क्षमता वा लुक्स के हेर्नुहुन्छ ?
आकर्षक मोडल छ भन्दैमा भिसा पाइदैन । मुख्य कुरा शैक्षिक अवस्था र आयल्सको स्कोर राम्रो हुनुपर्छ । त्यसपछि आर्थिक अवस्था कस्तो छ, विद्यार्थीको रुचि कस्तो छ, फ्युचर प्लानिङ के छ ? बुझेर काउन्सेलिङ गर्छौं ।
९) कतिपय कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीबाट भर्ना शुल्क, ट्युसन शुल्क तथा खान बस्नको लागि भनेर पैसा लिन्छन्, यसो गर्न मिल्छ ?
विडम्बना केहि कन्सल्टेन्सीले गर्दा समग्र शैक्षिक परामर्शदातृलाई दोष लागेको छ । विद्यार्थीले कन्सल्टेन्सी सञ्चालकलाई सर्भिस वापतको वाहेक अन्य शुल्क तिर्नु पर्दैन । विद्यार्थी, अभिभावकलाई मेरो आग्रह कुनै कन्सल्टेन्सीले विदेशमा खाने बस्ने भनेर पैसा लिन्छ भने त्यो विषयमा कलेज विश्वविद्यालयसँगै डाइरेक्ट परामर्श लिएर काम गर्नुहोला । विद्यार्थीको भिसा लाग्नु ठूलो कुरा हैन, विदेशमा गएर विद्यार्थीले हासिल गर्ने ज्ञान र सीप महत्वपूर्ण हो । त्यसका लागि राइट काउन्सलरबाट परामर्श लिनु जरुरी छ ।
१०) विद्यार्थीले एसओपी तयार गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?
सबै विद्यार्थीले हाइ कमिसनको स्टेण्डर्ड अनुसार एसओपी लेख्न जान्दैनन् । त्यसमा शैक्षिक परामर्शदातृले सहजीकरण गर्नुपर्छ । कुनै कन्सल्टेन्सीले आफैं एसओपी बनाइ दिन्छौं भन्छन् भने गलत हो । विद्यार्थीले बनाएको एसओपीलाई कन्सल्टेन्सीले करेक्सन गरेर पुनः विद्यार्थीलाई पढ्न दिनुपर्छ । यसो गरेको खण्डमा एसओपीमा समस्या आउँदैन ।
११) एइसीले अस्ट्रेलियामा विद्यार्थीलाई कसरी सहयोग तथा परामर्श दिने गर्दछ ?
एइसीले अस्ट्रेलियामा विद्यार्थीलाई हरेक विषयमा सपोर्ट गर्छ । अस्ट्रेलिया गएका विद्यार्थीलाई एयरपोर्ट देखि नै पिकअप गर्छौं । उनीहरुको खानबस्नको लागि उचित प्रबन्ध मात्र गर्दैनौं, काम खोज्न समेत सहजीकरण गर्छौं । बैंक खाता खोल्ने, ट्रेनको टिकट कसरी काट्ने, ट्याक्स फायल नं. खोल्ने, पिआर, टिआरसँगै होम लोनका विषयमा समेत सपोर्ट गर्नेर्छौं ।
१२) अर्बोड स्टडीमा जाने विद्यार्थीले एइसीलाई नै किन रोज्ने ?
हाम्रो टीममा अनुभवी र मान्यता प्राप्त क्वालिफाइड एजेन्ट, माइग्रेसन एजेन्ट, डकुमेन्टेशनमा लामो समय काम गरेका मेम्बरहरु छन् । हामीसँग मोटिभेसनल स्पीकर हुनुहुन्छ । विद्यार्थीलाई भोली पर्ने समस्याहरु, उनीहरुको चाहना, रुचिलाई बुझेर मेरो अस्ट्रेलियाको अनुभव समेतलाई विश्लेषण गरेर काउन्सेलिङ गर्ने गर्दछौं ।
हामी विद्यार्थीसँग अभिभावकको जस्तो केयरीङ गर्दै, साथीको जस्तो ब्यवहार गर्दै स्वदेश र विदेशमा साथ दिन्छौं ।
चोरीको आरोपमा नक्कली प्रहरी पक्राउ